Author: Tejar Arara
Xirsiyow dabuub gabay Sida la og yahay ummad kasta oo af, dhaqan iyo hidde wadaagta waxay leedahay murti iyo suugaan u gaar ah oo ay ku hirtaan. Ninkii diday ayaantii Sayidku wuxuu ahaa aabbihii afka Soomaali.
Doqon baan ogayn Suudiyow Gurigii Dariiqaan lahaa Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be gaabayadii. Awel maanso waataan dayacay Kufriga ina gabraaraya Ragga Ayl u kacahayow 5.
Nimanyahow xalaa lay gilgilay Diiwaankan waxaa ku qoran gabay oo Sayid Maxamed tiriyey intii u dhexeysay tii — kii, iyo 16 gabay oo gabayada Sayidka xiriir la leh.
Aad baad umahad santiin. Reerkayga kama soo rareen.
gabaygii sayidka koofil
Nafjeclaysigii baan ku iri jaallow iga daa dheh Jaljalleecadii baa wadnaha jeex i soo ruqay dheh Jeedaaladii baa indhuhu kor u jillaadeen dheh. Waxaan halkan uga baahanahay in aan helo gabayadan oo lagu luuqaynayo. Ta 2aad waxaa la dhihi karaa waa ninka Soomaalida ugu caqliga badnaa horaan, hadda iyo mustaqbalkaba taa cidi ka muransan ma jidho.
Adaa mudan walaal… waad ku mahadsan tahay soo booqashada aad nasoo booqatay…. Halkaan ka dhageyso warka duhur e radio wanlaweyn August 5, Like. Goortaan jarreerana gefoo nolol ka jaanqaaday Sida janannadii hore tashigu igu jaguugnaa dheh Taladii jinnigu ii horkacay jisadeed helay dheh.
Alla ha u naxariisto Sayid Maxamed Cabdille Xasan. Malaw ii soo godol Jidka Adari loo maro 9.
Ina Caliga Dhaaranahayaa Ninka gaalka la siiyay Calangube Xuseenow aqoon xume jawaab 4. Naagaba dumaashaan ka nacay Illaa iyo hadda ilama aha in Soomaali dhamaan laga heli karo nin Sayid Maxamed Cabdille Xasan oo kale. Aad baad u mahadsan tihiin sida quruxda badan ee noogu soo dhigteen gabayada Sayidka.
Sayidka Gabayadiisa waxaa ka mid ahaa: Ma duqaynay reer Bari Dhabdarrada ma qaayibo Aad ayaad umahadsan tihiin walaalayaal bahda soo tabisay gabayadaan waan jeclaan lahaa inaad ku soo dartaan gabay hooyo wiilkeeda uqaadi. Waxayna dhaxal u noqon doonaan dadka danbe ee wax qori doona. Guud ahaan waxay gabayadaasi muujinayaan dhaqankii Soomaalida iyo heerkii suugaantu waqtigaas joogtay.
Haddaan lays jikaareyn tolkay laga jil roonaa dheh Weligood waxaa lagu jaraa jilibdhig duullaan dheh Daraawiishi waa jibindhowga iyo jowga soo bixi dheh.
Odayaashii tan iyo muddo dheer u guntaday inay uruuriyaan ka dibna qoraan buuggan, waxaa sharaf iyo abaalmarinba ugu filan inay wariyeen wixii mahadho Sayidka laga hayey, anaguna waxay naga mutaysteen mahad iyo ammaan. August 18,